Grow Taller Exercises Book in Myanmar - Thaing Wizard
24 thoughts on “Grow Taller Exercises Book in Myanmar”
grow taller 4idiots နိုင်ငံခြားWebsideကတောင်အလေးထားတာဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်အကို…ကျတော်အခု5’5”ရောက်နေပါပြီ…ဒါပေမယ့်အရပ်ထပ်မထွက်တော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်…ကျတော်ထပ်ရှည်လာနိုင်ပါ့မလား…ကျတော်ဆေးလိပ်နည်းနည်းတော့သောက်ပါတယ်…အကြံပေးပါဦး…ပြီးတော့ပေါင်အပြင်ဘက်သားကြီးချင်ရင်ဘယ်လိုကစားသင့်ပါသလဲ…အလေးမတာနဲ့အရပ်ရှည်နည်းတွဲကျင့်ရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါသလား…ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်…
ဟုတ်။ ယောကျ်ားလေးများဟာ အသက် ၂၅-နှစ်လောက်အထိ အရပ်ရှည်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါက တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အရိုးအဆစ်ကို ပြောတာပါ။ အသက် ၂၅-နှစ်ကျော်သွားသူ လူကြီးပိုင်းများမှာကျ ခြေထောက်ကဲ့သို့ နေရာတွေ ထပ်ရှည်မလာတော့ပေမယ့် ကျောရိုးဆစ်တွေကို ရှည်လာအောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ကာယဗလလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်သူများဟာ ဆေးလိပ်၊ အရက်နှင့် အမြန်စာ (Junk Food) များကို မစားသင့်ပါဘူး။ မရှောင်နိုင်ရင်တောင် လျှော့စား၊ လျှော့သောက် ရပါမယ်။
နောက်တစ်ခုက အလေးမသူများ အရပ်ရှည်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် နည်းပြကောင်းနဲ့ တွေ့ဖို့လိုပါတယ်။ ကစားနည်းစနစ်ကျဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အရပ်ရှည်နိုင်တယ်ဆိုရာမှာ မွေးရာပါ မျိုးရိုဗီဇရှိသလောက်ထိ ရှည်နိုင်တာကို ပြောတာပါ။ အလေးမလို့ အရပ်ပိုရှည်နိုင်တာမှန်ပေမယ့် မျိုးရိုးဗီဇရှိတာထက် ပိုရှည်ချင်ရင် အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်း သီးသန့်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အလေးမတာနဲ့ကို တွဲမလုပ်စေချင်ပါဘူး။ အလေးမတာက အရိုးကို သိပ်သည်းစေပါတယ်။ သို့သော် မျိုးရိုးဗီဇထက် ကျော်လွန်မြင့်မားလိုသူများအတွက်ကတော့ နှစ်ခုတွဲလုပ်ရင် သိပ်အဆင်မပြေနိုင်ပါ။
ပေါင်ကြွက်သားတက်ဖို့ကတော့ အောက်မှာ အကြံပြုထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း လေးမျိုးကို တစ်ပတ်ကို တစ်ရက်ကစားပေးပါ။ http://thaingwizard.wordpress.com/2013/10/15/mini-home-workout/ မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကစားနည်းနဲ့ တွဲစပ်ပြီး ကစားကြည့်ပါ။ နှစ်လလောက် ကစာကြည့်ရင် သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
1. Side Lunges – ဘေးတိုက်ထိုင်ထ (ပေါင်၊ တင်ပါး)
2. Bulgarian Split Squats – ခြေတစ်ဖက်ခုံပေါ်တင် ခြေတစ်ဖောင်ရိုးထိုင်ထ (ပေါင်၊ တင်ပါး)
3. Squats – ရိုးရိုးထိုင်ထ (ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ကျောအောက်ပိုင်း)
ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပခုံးအကျယ်ထက်ပိုခွဲထားပြီး၊ ခြေဖျားများကို အတွင်းဖက်သို့ လှည့်ထားပြီး ကစားပါက ပေါင်ပြင်သားကို ထိစေမည်ဖြစ်သည်။ ခြေနှစ်ချောင်းကို နီးကပ်စွာဖြင့်ထားခြင်း၊ ခြေဖျားများကို အပြင်ဘက်သို့ လှည့်ထားခြင်းက ပေါင်တွင်းသားကို ထိစေမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အတိုင်း ပုခုံးအကျယ်တိုင်းခွဲ ကစားပါက ပေါင်းတွင်းသားရော၊ ပေါင်ပြင်သားပါ ညီမျှစွာထိမည်ဖြစ်သည်။
4. Calf Raises – ခြေသလုံးကြွ (ခြေသလုံး)
ဒါက ဖော်ပြပါ ကစားနည်း လေးမျိုးအတွက် သရုပ်ပြပုံပါ။
ေျခေထာက္႐ွည္လာေစဖို႔ကေတာ့ http://thaingwizard.wordpress.com/grow-taller-exercises-book-in-english/ မွာ အဂၤလိပ္လို အရပ္႐ွည္နည္း စာအုပ္ေတြ တင္ထားတာ႐ွိပါတယ္။
ဂုတ္သားတက္ဖို႔က http://thaingwizard.wordpress.com/2013/10/15/mini-home-workout/ မွာ တင္ထားတဲ့ အထဲက နံပါတ္-၂ ေလ့က်င့္ခန္း (Military Press) ကို လုပ္ပါ။ ဆံုဂုတ္သား၊ လက္ေမာင္းေနာက္သားနဲ႔ ပခံုးသားေတြအတြက္ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါတယ္။
ေျခသလံုးၾကြတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို ကစားေပးပါ။ ဒီမွာ http://thaingwizard.wordpress.com/2013/10/15/mini-home-workout/ တင္ထားတဲ့ စာအုပ္မွာ ပါပါတယ္။ Calf Raise ကို ေျပာတာပါ။ အဲ့ဒီမွာ တင္ထားတဲ့ ေအာက္ပိုင္းေလ့က်င့္ခန္း သံုးမ်ိဳးစလံုး (Squats, Lunges & Calf Raises) ကို ကစားႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။
Ei Thu on June 6, 2021 at 5:44 am said:
ညီမကအခု၁၅နှစ်ရှိပါပြီ ၁၃နှစ်ကတည်းကအရပ်မထွက်တော့တာပါ အရပ်ပြန်ရှည်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အမေက၅ပေ၅ အဖေက ၅ပေ၈ပါ